लाई जुत्ताको माला र कालो मोसो | बच्चा जन्माउने अधिकार पनि पायो – Dainik Sangalo
लाई जुत्ताको माला र कालो मोसो | बच्चा जन्माउने अधिकार पनि पायो
July 26, 2020 887
कोभिड–१९ को लक्षण देखिएका सङ्क्रमित भेटिन थालेका छन् । पहिले ९८ प्रतिशत सङ्क्रमितमा लक्षण नभएका पाइएका थिए भने अहिले देखिने नयाँ सङ्क्रमितमा कोभिड–१९ का लक्षण देखिन थालेको हो । अहिले नयाँ सङ्क्रमितमा लक्षण देखिन थालेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कार्यकारी निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । आजभोलि देखिएका सङ्क्रमितमा रुखाखोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या, थकाइ लाग्ने, जीउ थाक्ने, स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने जस्ता समस्या देखिन थालेका छन् ।
उहाँका अनुसार हालै काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएका १६ मध्ये नौ जनामा लक्षण देखिएको छ । “पहिले देखिएका सङ्क्रमितमा लक्षण देखिएको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले देखिएका सङ्क्रमितमा कोभिड–१९ का लक्षण देखिन थालेका छन् ।” लक्षण देखिएका सङ्क्रमित भेटिन थालेपछि सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले यही साउन ७ गतेदेखि बन्दाबन्दी खुलेसँगै सङ्क्रमणको जोखिम बढेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा सागरराज भण्डारीले भर्ना भएका बिरामीमध्ये एक तिहाइमा लक्षण भएका सङ्क्रमित भएको बताउनुभयो । अस्पतालमा अहिले २४ जना बिरामीमध्ये आठजना कोभिड–१९ का लक्षण देखिएका सङ्क्रमित रहेका छन् । उहाँका अनुसार ती बिरामीमा कसैलाई ज्वरो, रुघाखोकी, जीउ थाक्ने, श्वास फेर्न समस्या जस्ता लक्षण देखिएका छन् । “अन्य ठाउँभन्दा यहाँ बढी नै लक्षण भएका सङ्क्रमित उपचार गराउन आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ती कतिपय सङ्क्रमितलाई सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराइरहेका छौँ ।”
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद शर्माले पहिले भन्दा अहिले अस्पताल आउने सङ्क्रमितमा लक्षण देखिन थालेका बताउनुभयो । “पहिले अस्पतालमा भर्ना हुने सङ्क्रमित लक्षणविहिन रहेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले अस्पतालमा भर्ना भएका सङ्क्रमितमा सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो जस्ता लक्षण देखिन थालेका छन् ।” उहाँका अनुसार अहिले अस्पतालमा १५ जना सङ्क्रमित भर्ना भएकामा तीन जनामा सामान्य लक्षण देखिएका छन् ।
अस्पताल भर्ना भएका सातजना सङ्क्रमित भारतका रहेका छन् । ती सङ्क्रमितमा हल्का ज्वरो आउने, रुघाखोकीका समस्या रहेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म १८ हजार ३७४ सङ्क्रमितमध्ये ७०.५ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ९४७ जना निको भई घर फर्किसकेका छन् । मृत्यु भएका ४४ जनामा पनि दीर्घरोगी, वृद्धा, गर्भवती महिला रहेका छन् । अहिले पाँच हजार ३८३ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।
नेपालमा ५.५ प्रतिशत सङ्क्रमण दर रहेको छ भने सङ्क्रमितको मृत्यु दर ०.२ प्रतिशत र मृत्यु प्रतिदश लाखमा १.४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी विश्वमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड ५६ लाख ६६ हजार ८४० जना रहेका छन् । तीमध्ये ५४ लाख ७५ हजार १६३ जना (३४.९ प्रतिशत) सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् भने छ लाख ३६ हजार ७८७ जना कोभिड–१९ का कारणले मृत्यु भएका छन् । जुन कूल सङ्क्रमितको ४.१ प्रतिशत हो । यस्तै ९५ लाख ५४ हजार ८९० जना निको भई घर फर्किसकेका छन् । जुन निको हुने ६१ प्रतिशत हो ।
सरकारले लकडाउनलाई खुला गर्ने निर्णय गरेपनि इनरुवा नगरपालिकामा पुनः लकडाउन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, इनरुवा नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घ इनरुवा सुनसरीसहित सरोकारवालाको बैठकले इनरुवामा आजदेखि पुनः लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार साहले बताउनुभयो ।
कोरोना जित्दै, घर फर्किदै
कारोना सङ्क्रमित काभ्रेलीमध्ये ९५ प्रतिशतले कोरोनालाई जितेका छन् । पाँच प्रतिशत सङ्क्रमितको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कमाण्ड पोष्टले जनाएको छ ।
सङ्क्रमितमध्ये अधिकांशले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका हुन् । पाँच प्रतिशत आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । गत जेठ महिनायता २७ सङ्क्रमितमध्ये २५ घर फर्किएका हुन् भने दुई पुरुष धुलिखेलस्थित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको पोष्टका सदस्यसचिव एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा नरेन्द्र झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपचाररत सङ्क्रमितको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सङ्क्रमित सबै विदेशबाट फर्केका जिल्लाका नागरिक रहेको पाइएको छ ।
उच्च सतर्कताका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा जोखिम न्यूनीकरण भएको पोष्टले दाबी गर्दै आएको छ । “अन्यत्र सङ्क्रमण दर हेर्दा हाम्रो जिल्लामा जोखिम न्यूनीकरण भएकै मान्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालय प्रमुख डा झाका अनुसार कोरोना भाइरस समुदायमा फैलिसकेको छैन, यसकारण कारोनाको त्रास कम हुँदै गएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसबाट पहिलोपटक काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल अस्पतालमा उपचाररत सिन्धुपाल्चोकका २९ वर्षीया सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो ।
यसैबीच हाल तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका ११७ पुरुष र १३ महिला स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् । पोष्टका अनुसार ७५९ पुरुष र १५२ महिला क्वारेन्टिनको बसाइपछि घर फर्किएका छन् । हालसम्म तेस्रो मुलुकबाट ३२९ काभ्रेली घर फर्किएको तथा फर्कने क्रम जारी रहेको पोष्टले जनाएको छ ।
जिल्लाका १३ स्थानीय तहले हालसम्म ८५१ श्ययाको क्वारेन्टिन व्यवस्थित गरेका छन् । जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र पोष्टले स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको क्षमता १०० श्ययामा विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । विभिन्न देशमा ११ हजार ५८७ काभ्रेली रहेको पोष्टको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मजदुरीलगायत कामका सिलसिलामा जिल्लाका एक हजार १२५ भारतमा बस्दै आएको तथ्याङ्क छ ।
त्यसो त तेस्रो मुलुकबाट फर्केर आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिन बस्न चाहनेलाई पर्यटकीय नगरी धुलिखेलका सुविधासम्पन्न होटल क्वारेन्टिनसमेत व्यवस्थित गरिएको छ । सरकारद्वारा जारी निर्देशिकामा भने सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई १४ दिन क्वारेन्टिन र थप सात दिन होम क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट फर्केलगत्तै काठमाडौँको बसुन्धरास्थित वाग्मती प्रदशेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ बसेका काभ्रेलीलाई धुलिखेल ल्याई स्थानीय तहको जिम्मा लगाइने गरिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आउनेले पिसीआर परीक्षण गरेर आउने भएकाले पुनः जिल्लास्थित विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसाइ तथा समयावधि सकिएपछि पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिए तत्काल परीक्षण गरिनेछ भने सङ्क्रमण नदेखिएकालाई होम क्वारेन्टिनमा बसाइने गरिएको छ ।
Durgesh Thapa लाई जुत्ताको माला र कालो मोसो | बच्चा जन्माउने अधिकार पनि पायो
Prevछोराका लागि ल्याईएकी बुहारी आफ्नै बाबुले विवाह गरेपछि…
Nextबाग्लुङ पहिरोमा बेपत्ता दुईमध्ये एकजनाको शव फेला
प्रचण्डलाई चिडियाखानामा होइन बादललाई गल्लीमा घि,सार्ने वर्षमानको चेतावनी
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १४ गते आइबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
बर्दिवास त, नावग्र, स्त : नि, षेधाज्ञा तोड्दै प्र, दर्शनकारी सडकमा, २ प्रहरी घा, इते
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64549)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (55518)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (50404)